थुनुवा कक्षबाटै तीन कैदी फरार, प्रहरीको मिलेमतो कि लापरबाही ? | Citizen Post News
थुनुवा कक्षबाटै तीन कैदी फरार, प्रहरीको मिलेमतो कि लापरबाही ?
२०७६ असार २४ गते १०:२१
ललितपुर । डाँका, चोरीका र लागुऔषध कारोबारी मुद्दाका तीन जना अभियुक्त ललितपुर स्थित भैंसेपाटी प्रहरी प्रभागको थुनुवा कक्षबाटै फरार भएको घटना सार्वजनिक भएपछि छानविन समिति गठन गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरकी एसपी दुर्गा सिंह चन्दको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएको हो ।
फरार भएका तीन अभियुक्तहरुलाई प्रहरीले म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको थियो । उनीहरु एकाएक सोमबार राति थुनुवा कक्षबाट फरार भएका थिए । फरार हुनेमा डाँका तथा चोरी मुद्दाका क्रमशः शमशेर माझी र रुद्रलाल श्रेष्ठ तथा लागुऔषध मुद्दाका रवीकुमार तिमल्सिना रहेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार थुनुवा कक्षमा रहेको भेन्टिलेशनको जाली काटेर उनीहरू फरार भएका हुन् ।
तीन कैद फरार भएको उक्त प्रकरणलाई छानविन गर्न लापरबाही गर्ने प्रभागका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक किरण मल्ल र डियुटीमा रहेका प्रहरीहरुमाथि कारबाहीको तयारी गरिएको छ । थुनुवा फरार प्रकरणमा चार जना प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको र छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा थप कारबाही गरिने ललितपुर परिसरले जनायो ।